Diyaarad Ruush leeyahay oo lagu soo riday Suuriya – Radio Daljir
Diyaarad Ruush leeyahay oo lagu soo riday Suuriya
Febraayo 4, 2018 6:08 b 0
Mucaaradka Suuriya ayaa soo riday diyaarad dagaal oo ay leeyihiin Ruushka waqooyi galbeed Suuriya gobolka ku yaala ee Idlib, sidaasi waxaa sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Ruushka.
Duuliyihii diyaaradda Sukhoi oo 25 jir ah ayaa qaylo dhaan degdeg ah gaarsiiyay wasaaradda gaashaandhigga kadib markii uu gantaal lidka diyaaradaha ay ku dhacday diyaaradda uu la socday, sidaasi ayay sheegtay wasaradda gaashaandhigaa.
Duuliyaha ayaa geeriyooday, kadib markii ay mucaaradka ay isku dayeen inay nolosha ku qabtaan.
“Duuliyihii ayaa soo gudbiyay inuu ku dagayo meel ay maamulaan jabhadda Al-nusra, laakiin markii dambe dagaal ayuu ku geeriyooday lala galay argagaxisada” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka.
Masuuliyadda diyaaradda lasoo riday ayaa waxaa sheegatay Hayet Taxriir Al-shaam oo ah koox cusub oo ka dagaalanta Suuriya horayna u ahayd garab ka tirsan kooxda xiriirka la leh Al-qaacidda ee Al-Nusra.
Dowladda Ruushka ayaa qaaday weerar dhanka cirka oo aargoosi ah, waxaana lagu soo waramayaa toban qof inay ku geeriyoodeen sida dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo gudaha Suuriya ku sugan ay u sheegeen warbaahinta, laakiin dowladda Ruushka ayaa sheegtay weerarkaasi inay ku dishay sodon dagaalame.
QM ayaa sheegtay boqol kun oo qof inay ku barakaceen dagaalka Idlib muddo todobaadyo ah kasocda gudahood.
Madaxwaynayaasha dowlad goboleedyada oo kuwajahan Muqdisho